GORFEYNTA SILSILAD MAANSEEDDA MIIMLEY-Qaybtii 2aad Qalinkii..Cabdinaasir Axmed | Togdheer News Network
GORFEYNTA SILSILAD MAANSEEDDA MIIMLEY-Qaybtii 2aad Qalinkii..Cabdinaasir Axmed
Silsilad kasta waxa ay leedahay, waayo u gaar ah oo wakhtigu maamulo. Sidaas oo kale, ayay u leedahay dadyow aragti darafyo iska soo hor-jeeda ka kala taagan. Tusaale Boobe iyo Idaajaa aragti kala geddisan ayay ka qabaan, silsiladda Deellay. Sidoo kale isna waxaa Gorfeeyay “Hawd” oo si wanaagsan uga faallooday. “ Cabdinaasir Axmed Abraham.
1.01.ASLUUBTA HADALKA AYAY BAAL MARSAN TAHAY SILSILADDANI MA SOGOR-DOHNA
Quus nagu macsuumoow.” Maansada Mudduci.Xasan Daahir Isaaciil “Weedhsame.”
– In maanso-yahannada Silsilad maanseedda Miimley ka qayb qaatay oo u badan raad-barad badankoodana maansadu la weecweecanayso.
– In maansada ay ka dhalatay silsiladda Miimley, ee la magac baxday Mudduci ee uu curiyay Xasan Daahir ay aad ugu yar tahay Sarbeebtu. Waxa aan rumaysanahay qaabka uu hadalka u dhigay Weedhsame in uu jaan-gooyay qaab socodka silsiladda.
1.02.SILSILADDA WAXA KU JIRTA CAY